Semalt: Indlela yokuyeka i-WordPress Trackback & amp; Spingback Spam
Semalt: Indlela yokuyeka i-WordPress Trackback & Spingback Spam
Ukulandelwa kweendlela kunye neengxaki zokubambisa yindlela enhle kakhulu yabamemezeli kunye neeblogi bezokwabelana ngolwazi kunye nabalandeli babo kwaye baqhubeke neengxoxo ezinentsingiselo kunye ezixhamlayo nabafundi nabalandeli ngokubhala kwabo. Iindlela zokulandelela zikholelwa ukuba ziyi-WordPress zangaphandle izimvo. Ngokomzekelo, ukuba i-website isebenzisa isofthiwe yokubloga ehlukeneyo kunye nezixhumanisi zamanqaku akho, ziya kuthumela ngesandla izaziso zokukwazisa ngemisebenzi yayo. Kwezinye izandla, ukuphazamiseka kukuphela kwe-WordPress. Kuthetha ukuba umntu unokudibanisa namanqaku akho okanye izithuba zeblogi kuphela xa zombini usebenzisa i-WordPress njengenkqubo yokulawula umxholo oyintloko. Kwimeko apho, iiwebhusayithi zakho zombini zifanele zenze iingxaki zenzeke ukuze izithuba zingabhekiswa kakuhle. Uninzi lwabagaxeki luqhubeka nokugawula ukulandelwa kweendlela kunye nokuphazamiseka imihla ngemihla.
Awudingi ukukhathazeka njengoFrank Abagnale, ingcali ehamba phambili esuka kwi Semalt , inika apha indlela elula yokulandela ukuyilahla kunye nokuyikhusela kwikamva.
I-Topsy Blocker isebenza ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ihlose ukuhlaziya iifayile zokulandelela kunye neengxaki zakho kwiziko lakho lifumana imihla ngemihla. Ihlola kwakhona izimvo zakho kwaye ususe iimithombo ezingekho mthethweni ezifana ne-topsy..com. Ukuba umthumeli uya kuvela kwiiwebhsayithi ezinjalo, i-trackbacks kunye neengxaki ziza kusekwa njengogaxekile ngokuzenzekelayo. Kuphela kufuneka ufake kwaye usebenze esi sixhobo ukuqinisekisa ukuba isayithi lakho lihlala likhululekile kwiimpendulo zogaxekile, ukuphazamiseka, kunye neendlela zokuhamba.
Kukhuselekile ukuthetha ukuba i-Antispam Bee yinto eyaziwayo kwaye inamandla kunazo zonke kwiiblogi ze-WordPress. Iqukethe ngaphezulu kwama-200,000 okusebenzayo kunye nokuphela kwendlela yokuqinisekisa ukulandelwa kweengcingo kunye nokuphazamiseka kalula. Ukongeza, esi sixhobo sihlola iimpendulo ezichanekileyo kwaye sisusa amazwana angalunganga kwiwebhusayithi yakho. Ungayifaka kwiZixhobo> Ukhetho lwe-Antispam Bee, kwaye inkqubo ayikho indleko. Izicwangciso zalo ezingagqibekanga zingahle zilungiswe naliphi na ixesha, ngokusekelwe kwiimfuno zakho kunye niche yeblogi. Nangona kunjalo, izicwangciso zalo ezingapheliyo zanele ukuba zihambe kunye neblogi yangasese okanye iwebhusayithi yeqalo.
I-WP-SpamShield yinkqubo ebalaseleyo neyimfuneko ekufuneka uyiqwalasele njengoko inceda ukuphelisa iingxaki kunye neendlela zokuhamba. Ngokuzenzekelayo ifaka iKaptcha kwisayithi yakho kwaye icela zonke iindwendwe ukuba zingene kwiCaptcha ngenjongo yokuqinisekisa. Nangona kunjalo, abanye abafundi bakho abanako ukuqinisekiswa nenkqubo yokuqinisekisa ukuze uhlele ngokufanelekileyo. Le nkqubo ayiyi kuvimba i-bots eziza kukhwela iblogi yakho okanye iwebhusayithi. Endaweni yoko, uya kulahla iimpendulo zogaxekile, kwaye le iplagin isebenza ngokufana neefowuni. Amazwana okugaxekile avaliwe ngokwawo, kodwa ungayilungisa isethingi kwindawo yomlawuli uze uklikhe kwiZixhobo> Ukhetho lweWP-SpamShield.
Isiphetho - Yenza ngokuzenzekelayo izimvo njengogaxekile ukuba ziqulethe amagama angamagama angabamnyama:
Ngaphandle kwezi ndlela zingentla, i-WordPress ivumela ukuba sihlole iingxelo, ukuphazamiseka, kunye nokulandelelana ngokulula ukuze sikwazi ukumakisha ugaxekile ukuba kukho into engeyona nto. Naziphi na izimvo eziqulethe amagama okanye amagama kufuneka avalwe kwaye asuswe kwizithuba zakho ngokukhawuleza. Ngaphandle kokuba ungafumani izaziso, kufuneka umane ususe ezo mpendulo kwi-WordPress yakho ndawo.